FAMELAN-KELOKA ATAO INONA? – filazantsaramada
FAMELAN-KELOKA ATAO INONA?
Publié parfilazantsaramada	 juillet 21, 2017 septembre 13, 2017 Laisser un commentaire sur FAMELAN-KELOKA ATAO INONA?
« Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra. » I Jaona 1:9
Ny eo amin’izao tontolo izao; rehefa nanao ratsy dia asiana ratsy, ary raha ny saina tsotra dia izany no rariny. Kanefa noho i Jesosy, raha mifona sy miverina amin’ny fitiavany isika dia mamela ny helotsika Izy. – Noho ny nanaovan’i Jesosy sorona ny tenany: naniky halatsa-drà Izy, ary izay manaiky hosasany amin’ny ràny dia ho voadio tokoa.
– Ao an-tokantrano: raha miaiky ny fahotanao ianao dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotanao ary manadio anao koa.
– Ao amin’ny fiangonan’ny olo-masina koa no handraisana ny famelankeloka rehefa miaiky ny fahotana.
– Eo amin’ny fandraisana ny sakramentan’ny fanasan’ny Tompo: ny fisotrona ny ràn’ny fanekena vaovao (marika hita maso miombona amin’ny tenin’Andriamanitra) dia ny divay izay atolotra eo: Ity no ràko ny amin’ny fanekena vaovao.
– Ny olona voavelan’Andriamanitra ny fahotany no mahazo ny fiainana mandrakizay. Izany ary ny famindrampon’Andriamanitra ho antsika na dia eto an-tany ihany aza. Aza avela handalo ny famindram-pon’Andriamanitra fa sao handalo anao koa Izy rehefa eo ampialana aina ianao.
Publié parfilazantsaramada juillet 21, 2017 septembre 13, 2017 Publié dansUncategorized
IO FIANTSOANA IO
NY MASIRASIRAN’NY FARISEO SY NY SADOSEO.